Chipiri 13 Kubvumbi 2021
Chiziviso Chemakambani "Cinema, ahoy" ndiyo yaive chirevo chechipiri cheEuropean Film Festival kuCuba. Icho chikamu chepfungwa yekugadzira inotarisana nekufamba senzira yekubatanidza tsika. Iyo dhizaini inomutsa rwendo rwechikepe chekufamba kubva kuEurope kuenda kuHavana yakatakura mafirimu. Dhizaini yekukoka uye matikiti emutambo uyu yakafemerwa nemapasipoti uye nemabhodhi ekupfuura anoshandiswa nevafambi munyika yose nhasi. Pfungwa yekufamba nemafirimu inokurudzira veruzhinji kuti vagamuchire uye kuda kuziva nezvekutsinhana kwetsika.
Muvhuro 12 Kubvumbi 2021
Rambi Little Kong muunganidzwa wemarambi akajeka ayo ane hunyanzvi hwokumabvazuva. Oriental aesthetics inobhadhara kutarisisa kune hukama hwepakati uye chaihwo, huzere uye husina chinhu. Kuvanza maSMS zvakanyorovera mudanda resimbi kwete kungoita kusagadzikana uye kuchena kwemwenje, asiwo kusiyanisa Kong nemamwe marambi. Vagadziri vakawana iko kugona kwekugona mushure mekuita kanopfuura makumi matatu kuyedza kuratidza iwo magetsi uye akasiyana-siyana maratidziro, izvo zvinoita kuti zvinoshamisa kupenya kwemwenje. Chigadziko chinotsigira isina waya yekuchaja uye iine doko re USB. Inogona kuvhurwa kana kuvharwa nekungosimudza maoko.
Svondo 11 Kubvumbi 2021
Chikafu Iyo "Nekunakidzwa bata" bhokisi rezvipo iro rakakosha zvipo bhokisi kune vechidiki. Yakafuridzirwa pixel-maitiro matoyi, mitambo uye mabhaisikopo, dhizaini yacho inoratidza "guta rekudya" kune vechidiki vane mifananidzo inonakidza uye yakazara. Mufananidzo weIP uchabatanidzwa mumigwagwa yeguta uye vechidiki vanoda mitambo, mimhanzi, hip-hop uye zvimwe zvinovaraidza. Iva nemitambo inonakidza yemitambo apo uchinakidzwa nechikafu, taura hushoma, hunonakidza uye hunofadza mararamiro.
Mugovera 10 Kubvumbi 2021
Package Yechikafu Chinyakare chiJapan chakachengetedzwa chikafu Tsukudani hachizivikanwe munyika. Sosi-soy-yakakangwa-yakakangwa dhishi inosanganisa dzakasiyana siyana dzegungwa nezvakakoshwa zvevhu. Icho chitsva hacho chinosanganisira mavara mapfumbamwe akagadzirirwa kurongedza tsika dzechiJapan uye kuratidza maitiro ezve zvinosanganiswa. Iyo nyowani yemhando yemhando yakagadzirwa netarisiro yekuenderera mberi iyo tsika kwemakore zana anotevera.
Chishanu 9 Kubvumbi 2021
Uchi Dhizaini yebhokisi rezvipo zveuchi inofuratirwa ne "ecological rwendo" rweShennongjia nezvakawanda zvirimwa zvemusango uye yakanaka yechisikigo nharaunda. Kuchengetedza iyo nharaunda nharaunda nharaunda ndiyo yekusika theme yekugadzira. Iyo dhizaini inotora yechinyakare Chinese mapepa-akachekwa art uye mumvuri papa art kuratidza iyo yemuno yakasikwa ecology uye zvishanu zvisingawanzo uye zviri mungozi mhuka yekutanga-yakachengetedzwa. Huswa husina kunaka uye mapepa emuti anoshandiswa pane zvekutakura zvinhu, izvo zvinomiririra pfungwa yechisikirwo uye kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Bhokisi rekunze rinogona kushandiswa sebhokisi rakachengetwa rekushandisa zvekare.
China 8 Kubvumbi 2021
Kicheni Stool Chitsiko ichi chakagadzirirwa kubatsira munhu kuchengetedza kusagadzikana kwekugara-kwakamira kumira. Nekutarisa maitiro ezuva nezuva evanhu, timu yekugadzira yakawana kudiwa kwekuti vanhu vagare pazvitsitsinho kwenguva pfupi pfupi sekunge vakagara mukicheni kuti vambomuka, izvo zvakafemera timu kuti iumbe chigaro ichi kunyanya kugamuchira maitiro akadaro. Chigaro ichi chakagadzirwa nenzvimbo diki uye zvivakwa, zvichiita kuti icho chigaro chiwanike uye chisingadhuri-mutengo kune vese vatengi uye vatengesi nekutora pfungwa mukugadzirwa kwezvinhu zvinogadzirwa.
Temple Cheki Cheki Chishanu 18 Chikumi
calendar 2013 “Module” Kalendari China 17 Chikumi
calendar 2013 “Town” Khalenda Chitatu 16 Chikumi
Chiziviso Chemakambani Rambi Chikafu Package Yechikafu Uchi Kicheni Stool